Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Kutanga zvachose chili cheese keg
Vagadziri veHormel® nhasi vaparura yekutanga-kare Hormel® Chili Cheese Keg, shanduko yemutambo wemazuva ano yekudyara inosanganisa inonaka yeHormel® Chili nechizi mukati mehafu-mbiya keg inoshanda zvizere. Kubva Ndira 26 kusvika Kukadzi 6, 2022, vateveri vanogona kushanyira HormelChiliCheeseKeg.com kuti vawane mukana we "Tap into Greatness" nekupinza mukana wekuhwina Hormel® Chili Cheese Keg pagungano ravo guru.
The Hormel® Chili Cheese Keg inopa kukwidziridzwa kukuru kune kupararira kwechikafu chevateveri venhabvu - nekukasika kuita uyo ane rombo rakanaka kuve gamba rezuva remutambo. Muchishamiso chekuvandudza, iyi ngarava yakasarudzika yakagadzirwa uye kugadzirwa kuti ipe marita gumi nemashanu ekupisa, zvinonaka zveHormel® Chili Cheese dip kubva papombi kuti vanhu vanakirwe mumutambo wese.
Iyo keg ine proprietary inogadzirika yemukati yekudziya element, yepombi mubato muchimiro cheiyo iconic Hormel® Chili can, uye chili-chizi pombi inova nechokwadi chekudira zvakakwana. Uchishandisa yakanyatso kugadzirwa mukati cauldron, iyo keg inogona zvakare kuzadzwa kuti ishandiswe gare gare. Pakukwana, keg inopa ingangoita mazana matatu ne4 oz. sevhisi yeHormel® Chili Cheese fan mafuta ekusimbisa magungano ezuva remutambo. Kuti udzidze zvakawanda nezveHormel® Chili Cheese Keg, tarisa vhidhiyo pano.
Anohwina mumakwikwi ekutsvaira achapihwa Hormel® Chili Cheese Keg ruoko kumba kwavo kuitira mabiko avo eBig Game musi waKukadzi 13, 2022.
"Tinoziva kuti vatsigiri vanoda kudyisa kana vachiona mutambo wenhabvu unokosha wegore, asi vanodawo kuwedzera kufara pane zvavanoita," akadaro Corrine Hjelmen, Hormel® Chili Brand Manager. "Takafunga kuti ndeipi nzira iri nani yekuratidza vateveri vedu kuti Hormel® Chili ingadururira sei mufaro pane kugadzira isina kumbobvira yaedza hunyanzvi - Hormel® Chili Cheese Keg - hunozova hupenyu hwebiko ravo reBig Game."
Iyo Hormel® Chili Cheese Keg ndiyo yazvino yekuwedzera yeiyo brand's "Dururai" mushandirapamwe wekushambadzira, wakatangwa muna Ndira 2020, kuratidza Hormel® Chili senzira iri nyore yekuwedzera mafaro mukudya zvisingaite. Muchishambadziro chitsva cheterevhizheni chaburitswa nhasi chinonzi "Chili Cheese Hands," boka reshamwari dziri kuona nhabvu uye kuungana kunoshandurwa kuita bato repamusoro-soro mushure mekuravira Hormel® Chili Cheese Dip, maoko evaenzi akasvika mhiri. kamuri uye nekupindirana sezvo mumwe nemumwe achirwira kuravira kwavo kweiyi dip inonwisa mukanwa.
Mhosva dzeCOVID Dzakawedzera Zvakare Nekuda kwekushaikwa kweDiagnostic Supplies